Amaxwebhu kaGoogle achaziwe | Martech Zone
NgoLwesithathu, nge-9 kaJanuwari 2008 NgoLwesibini, Januwari 6, 2015 Douglas Karr
UXwebhu lukaGoogle luyintsikelelo ngokwenyani kwinkampani endiyisebenzelayo. Siyinkampani encinci ye-5 (sisandula ukuqesha eyesihlanu!) Kwaye asinayo iseva okanye isixhobo sokwabelana senethiwekhi. Ngokunyanisekileyo, asiyidingi.
Ukuqala kwam, onke amaxwebhu agqithiselwa nje nge-imeyile kwaye ngokukhawuleza aba nokudideka! Ndidubule ndadubula Google Docs kwaye saqala ukugcina amaxwebhu… emva koko nathi yafuduka ukuba Izinhlelo zeGoogle kwaye ngoku sigcina onke amaxwebhu ekwabelwana ngawo kuwo. Sinamalungu eqela eDallas, eSan Jose naseIndiya asebenza ukusuka Basecamp kwaye la maxwebhu mihla le kwaye kumnandi!
Ukusuka kwindawo yokuthengisa, ndicinga ukuba uGoogle amaXwebhu angangumthombo olungileyo wababhali nabakhupheli bokusebenzisa xa besakha umxholo womthengi. Kuba bobabini banokungena ngexesha elinye, hlela, ncokola, njl.… Kubonakala ngathi sisixhobo esifanelekileyo.
Ndiqaphele ubuGcisa obuqhelekileyo babelane ngenye ividiyo malunga namaxwebhu kaGoogle:
Ukuba awubhalisanga, kufanelekile! Kumashishini amancinci kakhulu anedlanzana labasebenzi okanye abasebenzi abekho kumbindi, yinkqubo elungileyo.
AmaXwebhu wethu onke kunye neNkqubo yesiCwangciso
I-Basecamp yindawo yokugcina izinto apho sinxibelelana khona kwaye sibambe inkqubela phambili yeprojekthi. Amaxwebhu kaGoogle asebenzisana ngakumbi kwaye agcina utshintsho kwimbali emnandi, ngenxa yoko siyisebenzisa kuneBascamp.
Phakathi kwezi zimbini, sisafuna inkqubo yolawulo lomsebenzi, ke eyethu indibaniselwano kunye nophuhliso lwenkampani uye wandivavanya I-Atlassian Jira. Ijongeka ngathi yinkqubo entle, ndiza kulandela kwaye ndikwazise ukuba isebenza kanjani!
tags: Ukuphicothwa kweBrandkhangela uluhluIMarTech Blog Radio ShowUhlobo lwezinto eziphilayoHlawula ngokucofa kanyePPCIntengiso ye-ppcmarblesuhlalutyo kwimidiya yoluntuividiyo ephathekayo
Yeyona 10 Ipesenti yokugqibela
Jan 9, 2008 ngo-7: 26 PM
Iposi enkulu, uDoug. Ndithetha nomnye wabahlobo bam ngenye imini, umfana oqhuba ivenkile encinci yoyilo. Usebenza nombhali iikhilomitha ezili-150 kude, kwaye ngamanye amaxesha usebenzisana nabantu abakude njengeDenver. Benza njani ukuba isebenze? Amaxwebhu kaGoogle kunye neeGoogle Apps. Ukuchaza ngokukhululekileyo i-REM, oku kunokuba sisiphelo sesoftware njengoko sisazi, kwaye mna ndingaziva ndilungile.
Jan 10, 2008 ngo-10: 19 PM
Ndivuma ngokupheleleyo, kodwa ndiza kuya phambili kwaye nditsho ukuba isebenza kakuhle kwiinkampani eziphakathi nezikhulu.
Ndisoloko ndithathela ingqalelo i-MS Office isicelo "esibalulekileyo", kodwa umntu endisebenza naye uzame ukundenza ndicinge ukuba ungenza ngaphandle kweOfisi ngokusebenzisa uGoogle amaxwebhu kunye nababukeli beOfisi yasimahla (umzekelo i-Excel Viewer). Ingxoxo yakhe yayikukuba xa ufunda amaxwebhu usebenzisa ababukeli (ukujonga ngokulula kunqakraza kabini), kodwa ukwenza amaxwebhu amatsha usebenzisa uGoogle amaXwebhu. Ndandithandabuza kuba ndingumsebenzisi omkhulu we-Exel, kodwa sele ndithenge ikhompyuter entsha (iVista, yikes!) Kwaye ndacinga ukuba ndiza kuzama. Ithathe kancinci ukuyiqhela, kodwa ngoku ndiqinisekile ukuba uchanekile kuba ndikwazile "ukusinda" malunga nenyanga ngaphandle kwemicimbi.
Iziphumo ebezingalindelekanga ezilungileyo kukuba ndiye ndabona ukuba amaxwebhu ayenzelwe ukuba kwabelwane ngawo. Ngoku ndikwindawo apho ndikhathazeka kakhulu xa abantu bethumela i-Excel ispredishithi ngenjongo zokusebenzisana nge-imeyile. Ayinamveliso kuba ngekhe uyazi ukuba yeyiphi inguqulelo yamva nje. Umntu unokuphikisa ukuba iServerpoint iserver isombulula ezo ngxaki, kodwa ayenzi njalo xa unabasebenzisi abakude / abakhubazekileyo abangakwaziyo ukunxibelelana neseva yakho yeSahlulo.
Olu tshintsho lunzima kakhulu kubasebenzisi kwimeko yokudibana, ngenxa yezizathu ezahlukeneyo, kodwa okwangoku ndibabona ngakumbi nangakumbi abasebenzisi bequmrhu besebenzisa iiapp ezisekwe kwiWebhu.
Ngelixa uyichazayo, "Sisiphelo sesoftware njengoko sisazi, kwaye ndi .." 🙂
Jan 14, 2008 kwi-4: 24 AM
Sisebenzisa inkampani encinci elingana nayo kwaye umnikelo ka-Zoho ulingana nathi kakuhle http://writer.zoho.com ukusondela kwindawo ye-MSWORD ngobulumko.
Jan 17, 2008 kwi-4: 04 AM
Ndiyayithanda noGoogle amaXwebhu, kodwa andiyithandi iBasecamp. ndikhetha Qhubeka. Izixhobo zilunge kakhulu, njengoko ungasebenzisana nabantu abaninzi kangangoko ufuna kwaye bonke baya kufumana iiakhawunti zasimahla.
Feb 23, 2009 ngo-11: 55 PM
Ndenza uphando ngendlela ii-SMBs ezisebenzisa ngayo ii -apps zikaGoogle kwaye zeziphi izithuba. Nceda ubhale malunga namava akho ngokudibanisa iJIRA.